Wararka - Midabka & Chem Pakistan EXPO
Midabka & Chem Expo waa munaasabad gaar ah oo lagu bixinayo adeegyo dhammaystiran oo tayo sare leh kiimikooyinka, dheehyada iyo warshadaha isbahaysiga ah si loo sameeyo astaan, loo horumariyo suuqyo cusub loona kaxeeyo iibka. Color & Chem Expo 2019 sidoo kale waxay siisaa aragti ku saabsan fursadaha ganacsi ee soo ifbaxaya qeybahan. Foring wuxuu kaqeyb qaatay EXPO afar jeer. Kulankii bandhigayaasha, Foring wuxuu kajeediyey khudbad kusaabsan Baaxada Suuqa Madoow ee Sulfur 2020. Khudbadu waxay kahadashay falanqaynta warshadaha Sulfur Black ee dakhliga, gobolada, horumarka, wadaagida iyo u janjeera.
Baaruudda Black waxay leedahay faa'iidooyin badan. Waxyaabaha soonka wanaagsan, qiimaha waxtarka leh & sahlanaanta ku-daba-galka xaaladaha kala-soocidda qiiqa, semi-joogto ah iyo isdaba-joog ah ayaa ka dhigaya mid ka mid ah dyestuffs-ka ugu caansan.
Dabeecadda - qiimaha yare ee yar-yar, milix wanaagsan & wax-ka-dhexgal wanaagsan
Waxqabadka dyeye heer sare ah, dhisid heer sare & joogtayn joogto ah
Guryaha nalka sare, dhaqida & dhididka soonka. Kalsooni dhexdhexaad ah & mid liidata oo koloriin ah (faa iido ugu jirta dhaqista Denim)
Intaa waxaa sii dheer, xulashada ballaaran ee xulashada noocyada kala duwan ee caadiga ah, leuco iyo foomka milixda ayaa ah qodobka ugu weyn ee keenaya jiritaanka joogtada ah iyo baahida sii kordheysa ee fasalkan dyestuff ah. Suuqa dharka adduunka ee dharka ayaa la filayaa inuu gaaro US $ 5.9 bilyan 2010, oo leh CAGR - 3.8%. Suuqa adduunka, Sulfur Dyes ayaa la filayaa inuu xisaabiyo saamiga qiyaastii 6%.
Sawirka ugu horeeya wuxuu muujinayaa in Foring madaxweyne kuxigeenka uu helayo koobkii muunadlaha bandhiga ee uu soo bandhigay qabanqaabiyaha 4th Color & Chem EXPO. Sawirka labaad wuxuu muujinayaa 5th Midabbada & Chem EXPO soo booqdayaashu waxay imanayaan qolkeena.
4aad Midabka & Chem Pakistan EXPO 2018
5aad Midabka & Chem Pakistan EXPO 2019